Ahoana ny fijerena ny efijery Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fijerena ny efijery Mac
Ignatius Room | | Solosaina Mac, Tutorials
Azo inoana fa, indraindray, dia tototry ny haben'ny efijery Mac ianao, rehefa miasa amin'ny tetikasa iray, ary nihevitra ny mety hisian'ny mividy monitor ivelany. Na dia marina aza fa io no vahaolana haingana sy mora indrindra, raha manana iPad isika, dia mety tsy mila mampiasa vola.
Lazao hoe mitady ianao fomba fitaratry ny efijery MacManaraka, asehoy anao ny safidy tsara indrindra azo alaina amin'izao fotoana izao eny an-tsena, na ny safidy teratany omen'i Apple antsika sy ireo izay ananantsika amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo ary manan-kery ihany koa.
2 Miaraka amin'ny fiasa Sidecar
2.1 Modely Mac mifanentana amin'ny Sidecar
2.2 Modely iPad mifanentana amin'ny Sidecar
2.3 Taratra ny efijery Mac amin'ny iPad
2.4 Mandefasa app amin'ny iPad
3 Mampifandray monitor ivelany
4 Volana Display
Raha mila hanitatra ny votoaty aseho amin'ny fahitalavitra izay ananantsika Apple TV mifandray, afaka manao izany isika manomboka amin'ny macOS High Sierra.
Ny dingana dia tsotra toy ny fipihana ny sarin'ny airplay hita ao amin'ny bara menu ambony amin'ny Mac, ary fidio ny anaran'ny Apple TV izay mifandray amin'ny fahitalavitra.
Manomboka amin'ny macOS Big Sur, miaraka amin'ny fanavaozana noraisin'ny macOS, ny bokotra AirPlay dia tafiditra ao amin'ny Ivontoerana fanaraha-maso, eo ambanin'ny anarana Fitaratra fitaratra.
Rehefa vita ny fifandraisana dia hiseho manga ny kisary AirPlay. Mba hanesorana ny fifandraisana dia tsy maintsy manindry an'io kisary io isika ao amin'ny bara menu ambony na ao amin'ny Control Center - Ecran duplicate ary tsindrio ny amin'ny fitaovana mampiseho ny ecran duplicate an'ny fitaovantsika.
Miaraka amin'ny fiasa Sidecar
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 13 sy macOS Catalina, ny orinasa miorina ao Cupertino dia nampiditra ny endri-javatra Sidecar. Ity fiasa ity dia mamela Mac manitatra na mitaratra ny efijery Mac amin'ny iPad.
Noho io fampiasa io, ireo mpampiasa manana iPad Pro dia afaka miasa amin'ny Photoshop, Pixelmator na mpanonta sary hafa miaraka amin'ny Apple Pencil.
Ny fepetra voalohany dia izay ny fitaovana roa dia tantanan'ny Apple ID iray ihany ary mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi mitovy ihany koa izy ireo, satria ny fampahalalana dia nafindra haingana kokoa noho ny fampiasana fifandraisana bluetooth. Misy ihany koa ny safidy hampifandray ireo fitaovana roa ireo amin'ny alalan'ny tariby fiampangana iPad, na tselatra na USB-C.
Ny fepetra faharoa dia ny hahitantsika fetra bebe kokoa, satria, indrisy, io fiasa io tsy mifanaraka amin'ny Mac rehetra eny an-tsena, toy ny tsy amin'ny iPads rehetra eny an-tsena.
Modely Mac mifanentana amin'ny Sidecar
MacBook Pro 2016 na taty aoriana
MacBook 2016 na taty aoriana
MacBook Air 2018 na aoriana
iMac 21 ″ 2017 na taty aoriana
iMac 27 ″ 5K 2015 na avy eo
Mac mini 2018 na taty aoriana
Modely iPad mifanentana amin'ny Sidecar
iPad Pro ny maodely rehetra
iPad generasi faha-6 na aoriana
iPad Air Generation faha-3 na taty aoriana
iPad mini taranaka faha-5 na taty aoriana
Taratra ny efijery Mac amin'ny iPad
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika, raha mahafeno ny fepetra rehetra voalazako etsy ambony isika, dia mandehana any an-tampon'ny menio bar ary tsindrio ny AirPlay kisary. Manomboka amin'ny macOS Big Sur, miaraka amin'ny fanavaozana noraisin'ny macOS, ny bokotra AirPlay dia tafiditra ao amin'ny Ivontoerana fanaraha-maso, eo ambanin'ny anarana Fitaratra fitaratra.
Amin'ny fipihana ity safidy ity, mandeha ho azy dia hiseho ny anaran'ny iPad-nay amin'ny fitaovana ahafahantsika mandefa na manao kopia ny famantarana avy amin'ny Mac.
Nanomboka tamin'io fotoana io, ny efijery iPad-ntsika dia hanomboka hampiseho sary mitovy amin'ny Mac-ntsika. Ao anatin'ny safidin'ny fanamafisam-peo, afaka mamindra ny toeran'ny efijery iPad isika mba hifanaraka amin'ny fomba ametrahana azy eo amin'ny biraontsika.
Mandefasa app amin'ny iPad
Raha tokony hampiasa ny efijery iPad ho taratry ny efijery Mac isika dia mila ampiasao izany ho fampiratiana miitatra, afaka manao izany koa isika. Raha ny marina dia ny safidy teratany no ahetsiketsika rehefa ahetsiketsika izany.
Amin'izany no ahafahantsika mandefa fampiharana haseho amin'ny iPad ihany fa tsy amin'ny Mac. Mba handefasana rindranasa amin'ny iPad dia tsy maintsy manindry sy mihazona ny bokotra Maximize isika mandra-piseho ny safidy Ahitsio ny habeny sy ny toerana misy ny varavarankely miaraka amin'ny safidy handefasana ny rindranasa amin'ny iPad.
Mampifandray monitor ivelany
Ny vahaolana haingana sy mora indrindra, raha manana monitor na fahitalavitra ao an-trano isika, dia ny mampifandray ny monitor amin'ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny seranana. Display Port, HDMI na USB-C miankina amin'ny fitaovana mampifandray azy.
Aorian'izay dia tsy maintsy miditra amin'ny Taratasy rafitra ary ao amin'ny fizarana Screen, safidio ny fomba tiantsika ny fiasan'ny efijery, na amin'ny fanaovana kopia ny atiny na fanitarana ny haben'ny desktop.
Luna Display dia a dongle kely mifandray amin'ny Mac ary izay ahafahantsika mandefa ny famantarana avy amin'ny Mac mankany amin'ny iPad. Tsy toy ny fiasan'ny Sidecar, miaraka amin'ny Luna Display dia tsy manana famerana fitaovana izahay, izany hoe mifanaraka amin'ny Mac sy iPad rehetra eny an-tsena.
Fa koa, Afaka mampifandray azy amin'ny PC Windows ihany koa izahay, manao ity fitaovana ity ho safidy mahafinaritra hampiasa iPad ho efijery faharoa ho an'ny Mac sy PC.
Toy ny hoe tsy ampy izany, miaraka amin'ny Luna Display isika dia afaka manova ny Mac na Windows PC ho ecran ivelany ho an'ny Mac. Araka ny hitantsika, Luna Display dia tontolon'ny fahafaha-manao ho an'ny mpampiasa fitaovana rehetra, na Apple na Windows.
Luna Display dia manana vidiny ambony, $ 129,99Na izany aza, mbola safidy mora kokoa noho ny fividianana iPad na Mac vaovao, miankina amin'ny fitaovana inona amin'ireo roa ireo no tsy mamela antsika hanararaotra ny fiasan'ny Sidecar teratany.
Mba hahatonga ny Luna Display hiasa amin'ny iPad ary afaka mampiasa azy io ho efijery faharoa dia tsy maintsy alaivo ity app manaraka ity.
Raha izay tiantsika dia ny fampiasana Mac na Windows PC ho efijery faharoa, tsy maintsy mitsidika ny tranokala Astropad (mpamorona ny Luna Display) sy alaivo ny logiciel mifanaraka amin'izany.
Luna Display dia misy amin'ny dikan-teny USB-C (ho an'ny Mac sy Windows), Asehoy ny Port ho an'ny Mac sy HDMI ho an'ny Windows. Mitovy ny vidiny.
Raha tsy manana Mac na iPad mifanentana ianao, ny vahaolana mora indrindra dia ny fampiasana ny fampiharana Duet Display, fampiharana izay mitentina 19,99 euros ao amin'ny App Store ary mamadika ny iPhone na iPad-ntsika ho efijery fanampiny ho an'ny Mac.
Ny hany afa-tsy amin'ity fampiharana ity dia ny hoe, raha te hampiasa ny Apple Pencil isika amin'ny iPad-ntsika, tsy maintsy mandoa famandrihana fanampiny izay ampiana amin'ny vidin'izany isika. Na izany aza, safidy mora kokoa noho ny fividianana iPad vaovao na Mac vaovao.
Alohan'ny hividianantsika ny fampiharana dia afaka manandrana azy isika misintona ny kinova ahena ity fampiharana ity amin'ny alàlan'ny rohy manaraka.
Rehefa nametraka ny fampiharana amin'ny iPad-nay izahay dia mandehana any amin'ny bokotra AirPlay eo amin'ny bara menu na amin'ny menio Duplicate screen raha toa ka ao amin'ny macOS Big Sur na aoriana izahay ary safidio ny anaran'ny iPad.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fijerena ny efijery Mac
Apple dia namoaka Edition Limited Beats Studio Buds mba hankalazana ny Taombaovao Aziatika
Efa misy fivarotana Apple 25 mihidy any Etazonia noho ny COVID